June 20, 2021 - Channel Lover
June 20, 2021 by Channel Lover
လူတွေ ထင်မထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ တခုပြီးတခု ဆက်တိုက်လာမယ်တဲ့…. ဘာတွေများ ဖြစ်ဦးမှာလဲမြန်မာ့အရေး ရောကမ္ဘာ့အရေးပါလူသားတွေက အဓိကမကျတော့ဘူ တဲ့…. ဝိဇ္ဇာနတ်တွေ နဲ့မိစ္ဆာ နတ်တွေ လွန်ဆွဲနေတာပါ တဲ့…. လူတွေ ထင်မထားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ တခုပြီးတခု ဆက်တိုက်လာမယ်တဲ့…. မိစ္ဆာနတ်တွေက အဆမတန်များနေလို့တန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်တွေ ကူညီလို့ရအောင်ကောင်းမူ့ကုသိုလ်တွေများများလုပ်ဖို့ နဲ့ငါးပါးသီလ လုံခြုံဖို့ တိုက်တွန်ုးပေးပါ…. အဲဒါဆိုရင် မြန်မြန်ပြီးလိမ့်မယ် တဲ့….. ဒီအတိုင်းသွားရင်တော့….ပျက်စီးမူ့တွေ အများကြီး နဲ့ အချိန်အကြာကြီး ကြာလိမ့်ဦးမယ် တဲ့….ကောင်းမူ့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်း နတ်တွေကို အမျှပေးကြပါတဲ့….. မှတ်ချက် ဘာပဲရေးရေး ဘာပဲပြောပြောအဆဲခံရမှာ မို့ယုံကြည်ပါလို့ မပြောသလိုမယုံကြည်နဲ့လို့လည်း မပြောလိုပါဘူး။ နားဝ ကြားသမ်ွကျိုပန္လည္မ်ွဝေတာပါ… ဘယ်သူပြောမှန်းမသိတဲ့အတွက်ဘာသက်သေပြချက်မှ မရှိပါဘူး ဦးမြင့်ခိုင် Unicode လူတှေ ထငျမထားတဲ့ အပွောငျးအလဲတှေ တခုပွီးတခု … Read more
လေယာဉ်ပစ်လောင်ချာဝယ်လှူချင်လို့ ရည်စူးပြီးထိုင်းထီမှ ဘတ်သိန်း ၁၂၀ ပေါက်တဲ့ မြန်မာလုပ်သား
မွနျမာလုပျသားတဈဦးထိုငျးထီပထမဆု နှဈဆောငျတှဲကံထူးနှဦေးတျောလှနျရေးကွီးအတှကျအားတတျစရာသတငျး ကောငျး AACကိုခြိတျဆကျအကူအညီတောငျးလာလို့နှဦေးတျောလှနျ ရေးအတှကျဆိုဘဲမွနျမာလုပျသားကံထူးရှငျ ထိုငျးဘတျငှသေိနျးတဈရာနှဈဆယျ လယောဉျပဈ လောငျခြာ ဝယျလို့လောကျမလားဦးခိုငျကြှနျတျော့ကို တျောလှနျရေးတပျထဲကိုပို့ပေးပါတဲ့ စဈကောငျစီရလေယောဉျဘယျ နှဈစီးလာမလဲတောထဲကစောငျ့နမေယျ အရေးတျောပုံအောငျနပွေီAAC မဟာမိတျအဖှဲ့ ဒါရိုကျတာ ဦးခိုငျကွီး ၁၆ ရကျ ၆လ ၂၀၂၁ထိုငျးရောကျမွနျမာလုပျ သားတဈဦးထိုငျးထီပထမဆု ဘတျ ၆ သနျးဆုနှဈစောငျ တှဲ ကံထူးရှငျဖွဈခဲ့ AAC ထံဆကျသှယျပွီးထီဆုငှေ ထုတျ ပေးရနျအကူအညီတောငျးခံလာ AAC အဖှဲ့ မှ ထုံးစံအတိုငျး 29 ဦးမွောကျကံထူးရှငျအား လုံခွုံစိတျခစြှာဖွငျ့အန်တရာယျကငျးစှာထီဆုငှမြေားနတှေ့ငျးခငျြး ထုတျယူနိုငျရေး AACဒါရိုတျတာဦးခိုငျ ကိုယျတိုငျဦး ဆောငျ၍လုပျငနျးစဉျ အဆငျ့ဆငျ့အား ကူညီဆောငျရှကျပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ယနေ့ ၁၆ ရကျနေ့ ထိုငျးထီကံထူးရှငျကတော့ မွနျမာပွညျမှာစဈအာဏာရှငျအုပျစိုးနခြေိနျ ပွနျသှားမှာမဟုတျပဲလုံခွုံ ရေးအရ ထိုငျးနိုငျငံမှာနထေိုငျသှားအုံးမှာပါ။ ကိုရဲမငျး AAC က … Read more
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၀)ရက်နေ့ ညနေ (၄:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၀)ရက်နေ့ ညနေ (၄:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားနည်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်ရှိနေပါသည်။ မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တွင် နေရာကွက်ကျား၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း)တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၆)ပေမှ (၈)ပေ ခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်ရှိမည်။ နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်။မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် ထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ … Read more
ယခုအချိန်​ကစပြီးပရိတ်သတ်ရှေ့ကို လုံးဝပြန်မလာတော့ဘူးဆို​သော ဟာသသရုပ်ဆောင် ဗေလုဝရဲ့ (ရုပ်​သံ)
ပရိတ်သတ်ကြီးရေဗေလုဝကိုလူတိုင်းသိပီးဖြစ်မှာပါ၊ သူရဲ့ဟာသတွေဟာအရမ်းရယ်ရပီးပျင်းစရာမကောင်း‌ဘဲပျော်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူပါတယ်။ သူဟာလယ်သူမဆိုင်ကိုကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကစခင်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊အခုတော့ဆိုင်ကိုစီးပွား‌ရေးအရပိတ်သိမ်းလိုက်ပီးဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဗေဟာကိုဗစ်ပထမလှိုင်းကတည်းကလေဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်၊အခုချိန်ထိကျန်းမာရေးပြန်‌လည်မကောင်းမွန်သေးပါဘူး၊ သူရဲ့ပရိတ်သတ်ရှေ့ကိုပြန်မလာတော့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊ စိတ်မကောင်းစရာဘဲနော်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်ရန် ပရိတျသတျကွီးရဗေလေုဝကိုလူတိုငျးသိပီးဖွဈမှာပါ၊ သူရဲ့ဟာသတှဟောအရမျးရယျရပီးပငျြးစရာမကောငျး‌ဘဲပြျောအောငျလုပျတတျတဲ့သူပါတယျ။ သူဟာလယျသူမဆိုငျကိုကိုဗဈမတိုငျခငျကစခငျဖှငျ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ၊အခုတော့ဆိုငျကိုစီးပှား‌ရေးအရပိတျသိမျးလိုကျပီးဖွဈပါတယျ။ ဦးဗဟောကိုဗဈပထမလှိုငျးကတညျးကလဖွေတျသှားတာဖွဈပါတယျ၊အခုခြိနျထိကနျြးမာရေးပွနျ‌လညျမကောငျးမှနျသေးပါဘူး၊ သူရဲ့ပရိတျသတျရှကေို့ပွနျမလာတော့ဘူးလို့ပွောကွားခဲ့ပါတယျ၊ စိတျမကောငျးစရာဘဲနျောပရိတျသတျကွီးရေ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှု့ပေးကွသော ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာသောနလေ့ေးဖွဈပါစေ ကြေးဇူးလညျးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။ ခရကျဒဈ &
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ လောကီဗေဒင်နိမိတ်ဖတ်ပညာရှင် လင်းညို့တာရာရဲ့ ဟောကိန်းတွေထဲက ထပ်ပြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်အချက်တစ်ချက်
အာဏာသိမ်းပြီးသိပ်မကြာခင် ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ လောကီဗေဒင်နိမိတ်ဖတ် ပညာရှင် လင်းညို့တာရာဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့မှာ လာမယ့် (၂၀၂၁) တစ်နှစ်လုံးစာ အတွက်ဟောကိန်းတစ်ခုထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို ဟောကိန်းတွေထုတ်ခဲ့ပြီး ဒီဟောကိန်းတွေ ဟာလည်း မှန်ခဲ့တာများပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ဟောကိန်းဟာလည်း တိုက်ဆိုက်ခဲ့တဲ့အချက်တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဟောချက် (၁၇) ချက် ထဲမှာ နံပါတ် (၈) အချက်ဖြစ်တဲ့ ” နာမည်ကြီး တန်ခိုးကြီး ဘုရားတစ်ဆူပြိုလဲခြင်း (သို့) ထိုဘုရားဖြင့် ပတ်သက်သော ပုရဝိုဏ်ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ” ဆိုတဲ့ ဟောထားချက်ဟာ မှန်ကန်သွားခဲ့တာပါ။ မနေ့က ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဖက်မုခ်တံတိုင်းပြိုကျပျက်ဆီး ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းမှုစတင်ဖြစ်ကတည်းက ပြည်သူတွေအန္တရာယ်ကာကွယ်စေနိုင်ဖို့ ယတြာတွေပေးခဲ့ပြီး … Read more
၂၄ နာရီအတွင်း မိုးကြီးနိုင်သည့်မြို့များနှင့် မိုးလေ၀သသတင်း
၂၄ နာရီအတွင်း မိုးကြီးနိုင်သည့်မြို့များနှင့် မိုးလေ၀သသတင်း နောက် ၂၄နာရီအတွင်း ဥရှစ်ပင် ကံမ. ရွှေတောက် ပြည် ပေါက်ခေါင်း ဝက်ထီးကန် ဆွာ သာဂရ ရေနီ မိုးရွာနိုင်ပါတယ် မောင်းတော ပလက်ဝ ရေဇွာ မတူပီ မင်းတပ် မိုးရွာနိုင်ပြီး နန်းယွန်း ခန္တီး လဟယ် ပူတာအိုနောင်မွန်းပန်နန်းဒင် ဒေသများမိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် ထူးကဲမိုးများနိုင်ပြီး ဧရာဝတီ ချင်းတွင်းမြစ် ရေကြီးခြင်းအထူးသတိထားရမည့်ကာလ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်းစိုက်တောက်သူများ မြစ်နီး မြေနိမ့်စိုက်ပျိုးကြသူများစိုက်ခက်းများ ကေမြုပ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက် (၂၀၂၁ခုနှစ်၊ဇွန်လ (၂၀)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေနေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေအားနည်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနေပါသည်။ ရန်ကုန်မှ တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်‌လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ခရီးအတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက် … Read more
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ၂၀.၆.၂၀၂၁ မှ ၂၆.၆.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက် ၂၀.၆.၂၀၂၁ မှ ၂၆.၆.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း တနင်္လာသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း သောကြာသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း စနေသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာဟောစာတမ်း credit unicode (၇)ရကျသားသမီးမြားအတှကျ ၂၀.၆.၂၀၂၁ မှ ၂၆.၆.၂၀၂၁ ထိ တဈပါတျစာဟောစာတမျး တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားအတှကျ တဈပါတျစာဟောစာတမျး တနင်ျလာသားသမီးမြားအတှကျ တဈပါတျစာဟောစာတမျး အင်ျဂါသားသမီးမြားအတှကျ တဈပါတျစာဟောစာတမျး ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားအတှကျ တဈပါတျစာဟောစာတမျး ကွာသပတေးသားသမီးမြားအတှကျ တဈပါတျစာဟောစာတမျး သောကွာသားသမီးမြားအတှကျ တဈပါတျစာဟောစာတမျး စနသေားသမီးမြားအတှကျ တဈပါတျစာဟောစာတမျး credit
မန္တလေးမြို့ PDF အဖွဲ့နှင့် စစ်တပ် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအပြီး ကျဆုံးမှုစာရင်း
June 22, 2021 June 20, 2021 by Channel Lover
မန္တလေးမြို့ PDF အဖွဲ့နှင့် စစ်တပ် အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအပြီး ကျဆုံးမှုစာရင်း မန္တလေးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် စစ်အုပ်စုဘက်က ၂ ဦးသေ၊ PDF ဘက်က ၆ ဦးဖမ်းဆီးခံရဟု PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပြော ဖူးအိအိနွယ် ဇွန် ၂၂၊ မဇ္ဈိမ မန္တလေးမြို့မှာ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၂၂ ရက် မနက်ပိုင်းက အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုတပ်တွေနဲ့ မန္တလေး PDF တို့အကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်အုပ်စုဘက်က နှစ်ဦးသေဆုံးကာ PDF ဘက်က ခြောက်ဦး ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ မန္တလေး PDF ရဲ့ သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုထွန်းတောက်နိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။ “သူတို့စစ်ကောင်စီဘက်က အနည်းဆုံး နှစ်ဦးကျတယ်။ အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့သူက ပစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ဖုန်းဆက် ကျွန်တော့်ကို သတင်းပေးသွားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ အထိအခိုက်လည်း … Read more
နှစ်ပါင်း(၅၀)ကျော်ကွဲကွာသွားတဲ့ ချစ်သူရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမြဲလာရှာခဲ့တဲ့ ဂျပန်အဘိုးအို
နှစ်ပါင်း(၅၀)ကျော်ကွဲကွာသွားတဲ့ ချစ်သူရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အမြဲလာရှာခဲ့တဲ့ ဂျပန်အဘိုးအို အချစ်စစ် ဆိုတာ တကယ်ရှိကြောင်း သက်သေ ပြသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကြောင်းကို ပရိသတ် ကြီးအတွက် ပြန် လည်မျှ ဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဒီအဖြစ် အပျက်လေးကို ဂျပန် နိုင်ငံ မှာရှိ တဲ့ မြန်မာကျောင်းသူ တစ်ယောက် ကအခုလို ပြန်လည်မျှဝေ ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဘိုးအသက် ၃၀ မှာတခါ ၃၅ နှစ်မှာတခါ မြန် မာက သူ့ ကောင် မလေးကိုလိုက် ရှာခဲ့ ပြီး ကောင်မလေးက အိမ်လည်း ပြောင်း ဖုန်းနံပါတ် ကလည်း မရှိ တော့ ဘယ်လိုမှအဆက်သွယ်ပြန် မရတော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ ၅ နှစ်တခါ မြန်မာကို ပြန်ဖို့ သူ ကောင်မလေးနဲ့ အတူ … Read more
လျှပ်စစ်မိုးကြိုးအန္တရာယ်နှင့် နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၀)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ‌ ခြေ အ နေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့ တွင် မုတ်သုံလေအားနည်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်မှ အားကောင်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တွင် နေရာကွက်ကျား၊ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)နှင့် ကယားပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် … Read more